१० करोड जनावरले फेसबुक चलाउँछन्
wifi and Internet Hacking
Fully Social Media Blog !
सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुकका अहिले १ अर्ब भन्दा बढि सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् । ती फेसबुक प्रयोगकर्ता सबै हामीजस्तै मान्छे नै हुन् भन्ने तपाइँहाम्रो ठम्याइ हो । तर अचम्मको कुरा के छ भने फेसबुकमा हरेक दशमा एक प्रयोगकर्ता मात्र मान्छे हुन् र बाँकी एक कि त जनावर हो, कि त कुनै ब्राण्ड हो वा कम्पनी हो .
पछिल्लो अध्ययनले फेसबुकका दश प्रतिशत प्रयोगकर्ता गैरमानव रहेको तथ्य पत्ता लगाएको हो । फेसबुकका कम्तीमा १० करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता घरपालुवा जनावर तथा कुनै कम्पनी वा ब्राण्ड हुन् ।
रोचक कुरा त के भने फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गको कुकुर समेत फेसबुकको प्रयोगकर्ता हो । जुकरबर्गको कुकुर बिष्टको नाममा पनि फेसबुक पेज खोलिएको छ । जुकरबर्गको कुकुरको फेसबुक पेज १५ लाख भन्दा बढिले लाइक गरेका छन् ।
इन्टरनेट मार्केट रिसर्च कम्पनी इ मार्केटरका अनुसार फेसबुकका १ अर्ब बढि प्रयोगकर्ता मध्ये केवल ८८ करोड ९३ लाख मात्र खास मान्छे हुन् । यद्यपि बाँकी अकाउण्ट पनि मान्छेले नै खोलिदिएका हुन् । तथापि त्यो जनावर, कम्पनी वा ब्राण्डको नाममा खोलिएको तथा चलाइएको छ ।
- Copyright © HANDS & MIND Designed and Developed by Govinda Baniya